ကျောက်တော်မြို့နယ် ကျောက်တစ်လုံးရွာထဲလက်နက်ကြီးကျည်ကျ၍ ထိမှန်ဒဏ်ရာသူ ၄ ဦးထဲမှ ၃ ဦးကို စစ်တွေဆေးရုံသို့ ယူဆောင် | Narinjara News
+959250 142 518
+959262 383 680
ကျောက်တော်မြို့နယ် ကျောက်တစ်လုံးရွာထဲလက်နက်ကြီးကျည်ကျ၍ ထိမှန်ဒဏ်ရာသူ ၄ ဦးထဲမှ ၃ ဦးကို စစ်တွေဆေးရုံသို့ ယူဆောင်
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ကျောက်တစ်လုံးကျေးရွာအတွင်းသို့ ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီက လက်နက်ကြီးကျည်တစ်လုံး ကျရောက်ပေါက်ကွဲ၍ ရွာသား ၄ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ထိုအထဲမှ ၃ ဦးမှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်၍ စစ်တွေဆေးရုံသို့ ယူဆောင်သွားခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
စစ်တွေဆေးရုံသို့ ယူဆောင်သွားရသူ ၃ ဦးမှာ ကျောကုန်းတွင် ဒဏ်ရာရရှိသူ ဦးကျော်သိန်းဦး(၃၅) နှစ်၊ ပေါင်ရင်းတွင် ထိမှန်ဒဏ်ရာရသူ ဒေါ်လှသန်းယဉ် (၃၅) နှစ်နှင့် ခါးစတွင် ကျည်စထိမှန်သူ ဒေါ်အေးနုယဉ်(၄၅) တို့ဖြစ်ကြသည်။
ကျောက်တော်မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ကုသနေရသူမှာ ခြေထောက်နှင့် လက်ဖဝါးတွင် ဒဏ်ရာရရှိသူ ဦးစောသန်းမောင် (၅၀) နှစ် ဖြစ်သည်။
ရွှေဂရုဏာလူမှုကူညီရေး အသင်းမှ ဦးဘိုအောင်သိန်းက “ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ကို ကူညီတောင်းတဲ့ အတွက် ကားနဲ့ သွားရောက်ယူဆောင်ပြီးကျောက်တော်ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မနက် ၉ နာရီလောက်မှာ လက်နက်ကြီးကျည်က အိမ်နှစ်ဆောင်ကြားထဲကျတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘယ်က ပစ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မမြင်ရတဲ့ အတွက် မပြောနိုင်ပါ။ ကာယကံရှင်တွေကို ကိုယ်တိုင် မေးကြည့်ရင် ကောင်းပါမယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာက ၄ ဦးပါ။ ဒီအထဲက ၃ ဦးကတော့ ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွက် စစ်တွေဆေးရုံကို ယူဆောင်သွားပါပြီ” ဟု ပြောကြားသည်။
ကျည်ထိမှန်သူများကို ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီး သွားယူခဲ့သူ ကျောက်တော်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းဝင်းက စစ်တွေသို့ ယူဆောင်သူ သုံးဦးထဲတွင် အမျိုးသားဖြစ်သူ ဦးကျော်သိန်းဦးတွင် ကျည်စ အနည်းငယ် အထဲကို ဝင်သွား၍ စိုးရိမ်ရကြောင်း၊ ကျန်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးမှာ အသက်ဘေးစိုးရိမ်စရာမရှိဟု ဆရာဝန်ကြီးက ပြောကြောင်း နိရဉ္စရာသို့ ပြောကြားသည်။
“ ဖြစ်တာက ဒီနေ့မနက် ၈ နာရီကျော်လောက်မှာ သရက်တစ်ပင်ရွာအနီး တပ်ရင်း ၃၇၆ နဲ့ သိန်းတန်ရွာကြား၊ ပျိုးဥယျာဉ်တွေရှိတဲ့ နေရာမှာ မိုင်းတစ်လုံးကွဲတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရွာသားတွေပြောတာကတော့ အဲဒီဘက်က လက်နက်ကြီး တစ်လုံး လာတယ်လို့ ပြောတယ်။ အိမ်ဝင်းထဲကျပြီး လင်မယားနှစ်ယောက်ကို လာထိတယ်။ အိမ်ဘေးနားက နောက်ထပ် နှစ်ယောက်ကိုလည်း ကျည်စတွေလာထိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားယူပြီး ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးပြောတာကတစ်ယောက်က နည်းနည်း ဒဏ်ရာပြင်းတယ်လို့တော့ ပြောပါတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
ကျောက်တစ်လုံးကျေးရွာက ဆွေမျိုးတော်စပ်သူ အရပ်လူကြီးတစ်ဦးဆက်သွယ်ရာ ဖုန်းမကိုင်သဖြင့် မေးမြန်းတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများကြောင့် အရပ်သား သေဆုံးမှုမှာ ၂၅၀ ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ကာ ဒဏ်ရာရရှိသူမှာ ၆၀၀ နီးပါးရှိသွားပြီဟု ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ရမ်းပေါက်ကုန်ဘောင်ကျေးရွာ အမျိုးအဆွေ ရွာလည်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီ
စပါးထားကျေးရွာဖြစ်စဉ်အပြီး လူဦးရေ ၂ဝဝ ခန့် မင်းပြားမြို့ပေါ်သို့ ထွက်ပြေးလာ
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေအိမ်မှ ဖုန်း ၂ လုံး အခိုးခံရ
စစ်ဘေး စစ်ရေး သတင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စစ်ဘေးရှောင် မှုခင်း လူ့အခွင့်အရေး တရားစီရင်ရေး စစ်ပွဲ မူခင်း ပညာရေး မိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ စစ်ရေးစစ်ရာ လွှတ်တော် ကျောင်းသားရေးရာ မီးဘေး နိုင်ငံရေး စစ်ဒဏ် ကျန်းမာရေး အားကစား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဆန္ဒပြပွဲ နိုင်ငံတကာ တရားရေး လူမှုရေးရာ ဘာသာရေး မူးယစ်ဆေးဝါး အင်တာနက် သဘာဝဘွှေးန္တရာယ် စီးပွားရေး အင်တာဗျူး သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ရေဘေး သံခင်းတမန်ခင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အင်တာနက်လိုင်း ဒုက္ခသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံရေး ဆန်စပါး မူးယစ် News သဘာဝသယံဇာတ ဆောင်းပါး စိုက်ပျိုးရေး ခရီးသွားလုပ်ငန်း/ရခိုင် စိုက်ပျိုးရေး ိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
နေရပ်ပြန်စေတနာ့ဆေးဝန်ထမ်းများကို စစ်တွေမှကိုဗစ်လူနာများက ကျေးဇူးတင်စကားဆို
စစ်တွေဆေးရုံကြီးမှ ဆင်းခွင့်ရသူ ၆၆၈ ဦးရှိပြီး နောက်ထပ်ကိုဗစ်လူနာ ၁၇၈ ဦးသာကျန်ရှိ
ရမ်းဗြဲမြို့နယ်တွင် ANP ပါတီအောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုဖျက်ဆီးခံရ
ရခိုင်နှင့်ပလက်ဝတို့တွင် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်၍ အရေးယူခံရသူ ၅၂ ဦးရှိ
အမ်းမြို့နယ်၌ ၂ ရက်အတွင်းလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ထားသည့် အလောင်းနှစ်လောင်းရေထဲတွင်တွေ့
The Narinjara is also the name ofaflourishing ancient city-state on Lemro dynasty in ancient Arakan kingdom. As we want to get peace in Arakan as well as in Burma. So the name of the Narinjara that stands for peace has been given for our news agency.
Enter your email and we'll send you updated news by weekly.
Copyright © 2019 Narinjara News. All Rights Reserved.